Wasiirka cadaaladda XFS oo shir guddoomiyay kulan bahda cadaaladdu maanta yeesheen. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka cadaaladda XFS oo shir guddoomiyay kulan bahda cadaaladdu maanta yeesheen.
Wasiirka cadaaladda XFS oo shir guddoomiyay kulan bahda cadaaladdu maanta yeesheen.
Shir ay soo qaban-qaabisay wasaaradda cadaaladda XFS oo ay ka qayb galeen bahda cadaaladda dowladda dhexe iyo dowlad-goboleedyada ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana shir guddoomiyay Wasiirka cadaaladda XFS abuukaate Xasan Xuseen Xaaji iyadoo kulankaas warbixino looga dhageystay bahda cadaaladda ee shirka ka qayb galay.
Warbixinada laga dhageystay bahda garsoorka dalka ee maanta shirka loo qabtay ayaa ku saabsanaa waxyaabihii ka qabsoomay mashaariic hormarineed oo loogu talo galay in lagu hormariyo hay’adaha garsoorka iyo qaabkii loo maareeyay sida uu sharaxayo wasiirka cadaaladda XFS Abuukaate Xasan Xuseen Xaaji.
Sidoo kale wasiirka cadaaladda dalku waxaa uu shir guddoomiyay shir ay isugu yimaadeen bahda cadaaladda dalka iyo deeq bixiyaasha caalamku kaas oo diirada lagu saaray dhaqan galinta barnaamijyada hormarineed sida dhismaha iyo tayeynta xabsiyada wadanka iyo hirgalinta barnaamijyo horay looga heshiisyay sida marka kale uu sharaxayo Abuukaate Xasan Xuseen Xaaji.
“Waxaan sidoo kale kulan la qaadanay deeqbixiyaasha caalamka waxaan ka doodnay hirgalinta barnaamijyada hormarineed sida dhismaha xabsiyada iyo tayeyntooda in la hirgaliyo barnaamijyadii horay loo wada gaaray waxaana la isku afgartay in hadda laga wada shaqeeyo dhaqangalinta barnaamijyadaas oo dhan”ayuu yiri Wasiirka cadaaladda.
Previous articleWasiirka amniga XFS oo ka hadlay amniga Galmudug.
Next articleDowladda Soomaaliya “ciddii fulisa amarrada shabaab tallaab ayaan ka qaadeynaa.